Sida loo dhigo koofiyad Kirismas ah astaanta WhatsApp | Androidsis
Sida loo dhigo koofiyad Kirismas ah astaanta WhatsApp
Waxaan ku jirnaa bartamihii Kirismaska ​​iyo in kasta oo xaqiiqda ah in dabaaldegu uusan aheyn sidii sanadihii hore, waxaan la qaadan doonnaa dadka ugu dhow ee gurigeenna. Teknolojiyada ayaa sii wadi doonta inay noqoto midda ugu doorbid badan ee dad badani ugu hambalyeeyaan ciidaha dhammaan dadkaas oo aanan arki karin xaddidaadda nadaafadda awgeed.
WhatsApp Waxay noqon doontaa mid ka mid ah codsiyada inta badan lala isticmaalo Telegram si loo diro farriin, cod qoraal ah ama wicitaan fiidiyoow ah iyadoo la adeegsanayo farriin deg deg ah. Midka koowaad, WhatsApp, mahadnaqa codsiyada dibedda ayaa noo oggolaanaya inaan beddelno astaanta iyo ku dar koofiyad kirismas ah astaanta.
U beddelashada astaanta mid ka mid ah kuwa firfircoon ayaa ka dhigi doonta inta hartay kuwa leh inay ku istaagaan astaantaas fudud, tan iyo koofiyad Santa lagu daray oo waa wax muuqda. WhatsApp ka sokow, waxaa lagu dari karaa codsi kasta oo kale oo aan maalin kasta ku isticmaalno taleefannadeenna.
Midka WhatsApp, isagoo cadaan iyo cagaarba leh, wuxuu u taagan yahay casaan iyo cadaan, wuxuu ku saxanyahay mid ka mid ah dhinacyada sumadda lagu sheegay. Nidaamka waxaa lagu fuliyaa barnaamijka 'Nova Launcher', oo ah barnaamij laga heli karo Play Store iyo inay lacag la’aan tahay qof walba.
Nova La Shaqeeye
Developer: Software-ka TeslaCoil
Waxa ugu horreeya ayaa ah inaad soo dejiso oo aad ku rakibto barnaamijka Nova Launcher ee bartayada
Download sawirkan in aan ku martigalnay Ibb badhanka saxda ah - Badbaadso sawirka sida
Hadda oo la furayo arjiga Nova Launcher, waxaad arki doontaa desktop-ka, furi khaanadda barnaamijka oo dooro WhatsApp
Ku dhaji astaanta WhatsApp ugu yaraan laba ilbiriqsi oo guji Edit markii ay ku tusayso xulashooyinka
Waxay ku siin doontaa fursado dhowr ah, dooro tan labaad, inaad beddesho astaanta oo hadda dooro sawirka aad ku soo dejisey astaanta WhatsApp oo leh koofiyadda kirismaska
Waad tafatiri kartaa cabirka astaanta si shaqsi ahaan loo dhigo loona keydiyo isbedelada si ay u dhaqan galaan
Si ay u dhaqan gasho waa inaad ka furataa arjiga Nova Launcher taleefankaaga Android, markuu xiro, waxay ku tusin doontaa qaabka fudud ee had iyo jeer. Nova Launcher waa barnaamij bilaash ah oo noo ogolaanaya inaan shakhsi ka dhigno taleefankeena, oo leh mowduucyo cusub, astaamo iyo xulashooyin kale oo badan oo xiiso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo dhigo koofiyad Kirismas ah astaanta WhatsApp
Xiaomi Mi 11: qeexitaanno farsamo oo dheeri ah ayaa ka muuqda